Nbudata Blog: SR Coley | Martech Zone
Nke a bụ ihe pụrụ iche! Stivin bụ ezigbo enyi nwa m nwoke, bụ́ Bill. Stivin bu ezigbo nwoke - mara ihe nke ukwuu, nwee oke mmasi ma nwee ndidi. Amaara m mgbe ọ na-egbu m ụra maka ajụjụ ọ nwere ike ọ na-arahụ ụra ụra abalị n'ihi ya enwere m obi ụtọ inyere ya aka.
Ọkpụkpọ Stephen kwesịrị ịmasị nke ukwuu n'afọ na-esote ka ọ na-aga Germany. A maara Germany n'ezie maka ya enweghị nke ndị na-ede blọgụ. Ọ bụ ihe ọ bụla dị egwu - naanị na ọdịbendị, mba ahụ na-elekọta mmadụ na mpụga mgbasa ozi na nkeonwe n'ime mgbasa ozi. Nke ahụ nwere ike bụrụ nnukwu ihe mmụta maka ndị America na Asias iji mụta… anyị ga-ederede ma ọ bụ zigara ndị na-eto eto n'ofe ụlọ kama iziga ha ozi!
Stivin, m hụrụ n'anya maka etu ebe blọọgụ gị si nwee ọnụ. Style dị ọcha nke ọma. You're bụ ezigbo nwa nwoke dị jụụ mana amaara m na ị nwere akụkụ ọzọ, kwa. M na-ahụ ya na gị nnukwu nlele piers na ị na-ege ntị Njikọ! Ọ bụrụ na i wepụpụrụ foto gị, agaghị m eche na ị ga-enwe oghere ndị ahụ. M na-eche otu ị ga-esi jiri nke ahụ wee chọọ saịtị gị mma ka ndị mmadụ mara na ị nwere akụkụ dị jụụ, nke akwadoro na ihe okike (na-eti mkpu?) 🙂
Ikekwe ụfọdụ ụdị ochicho mma na nkụnye eji isi mee ndabere image? Lelee foto a dị na pownce:
Ihe dị otú ahụ ọ ga-arụ ọrụ? ebe ejighị ya kpọrọ na ndabere?
Naanị ihe masịrị m, mana m ga-ewepụta akara ngosi Digg. Ha dabara adaba, mana ị nwere peeji na peeji nke ọgazị (zeros). Echere m na ọ na - ewepụ na post gị karịa ka ọ na - agbakwunye. Ikekwe ị nwere ike ịrụ ọrụ ụfọdụ anwansi wee zoo ya na 0 ma gosipụta ya mgbe ọ karịrị 1? Igosi ọkwa na stats na-enye ndị na - agụ akwụkwọ echiche na blog ma ọ bụ post dị mkpa. Mana inwe ọkwa dị ala ma ọ bụ stats nwere ike ime ka ndị mmadụ kwụsị ịgụ ma ọ bụ ịdenye aha!
Ekwuru m ngwa mgbakwunye a na ọzọ tipping: Iji na-ebi akwukwọ gburugburu, M ga-akwado ndị Njikọ posts ngwa mgbakwunye ma tinye posts ndị yiri ya na ala nke ọ bụla n'ime posts gị. Wayzọ a ndị na-achọta gị site na Nchọgharị Nchọgharị ga-agụ post gị ma ọ bụrụ na ha ahụghị ihe ha chọrọ, ha nwere ike ịrapara maka isiokwu ndị ọzọ dị na otu isiokwu ahụ. Nke a ga-enyekwa aka miri na ejikọ maka Nchọgharị Nchọgharị.
Dị iche gị posts na ihe oyiyi. Ihe onyonyo dị na posts na-adọta uche ndị na - agụ akwụkwọ - ọkachasị ma ọ bụrụ na edebanye aha ha na ndepụta. Gaa na nsogbu nke ịchọta ezigbo foto ma ọ bụ mpempe akwụkwọ clipart ma tinye ya na post blog. M ga-eme nke a karie na ị ga - ebudata posts! Nseta ihuenyo ma ọ bụ akara ngosi nke ngwanrọ ga-adọrọ uche mmadụ. Nwekwara ike ịchọrọ ịkọwapụta akara ngosi nke aha blọgụ gị ka ha wee dịkwuo arọ karị. Mgbe m nyochaa peeji gị, achọpụtara m na m na-enyocha aha (ma eleghị anya ọ bụ naanị m!)
Oh - na achọtara m njehie dị mfe iji dozie - faịlụ gị robots.txt na-atụ aka na saịtịmapụ nke na-adịghị adị. Ozi ọma ahụ bụ na ị nwere saịtị saịtị! Akụkọ ọjọọ dị na Google nwere ike ọ gaghị awagharị saịtị gị nke ọma na enweghị ya.
Otu ihe ikpeazu… ihe yiri ihe cha cha na njikota n'ime post nke i tinyere. Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-edepụta koodu site na HTML ọ na-emebi.
Nwee obi ụtọ, Stephen! Ekwesịrị m ileba anya na ịkatọ saịtị gị. Na-arụ ọrụ dị egwu!
Tags: ndabere imagecoleyigwupluginyiri postsrobotsNwachukwustephen coley
Ntinye aka na Blog: Winextra
Jul 6, 2007 na 9:50 PM
Daalụ ụda Doug! Edoziri m njikọ ahụ na post m. O nwere ihe jikọrọ ya na akara nhota.
Ka o sina dị, enwere m nnukwu ekele maka nkatọ gị. Might nwere ike chọpụtala na ọ dịchabeghị ọdịnaya na blọọgụ m n'oge na-adịbeghị anya, mana ugbu a enwere m ọrụ niile a, m kwesịrị ịlaghachi na egwu. Daalụ ọzọ. Agaghị m achọ ka onye ọ bụla zite blog m.
Jul 6, 2007 na 11:40 PM
Daalụ Stephen! Really n'ezie wụpụ n'ọnụ ụzọ ámá na-agba ọsọ zuru ezu.